PCBA Kugona - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PcbFuture inopa vatengi vedu yakavimbika Turnkey PCB musangano webasa iro rinozadzisa mibairo yakanaka pamitengo yemakwikwi. Imwe-yekumira pcb musangano webasa inosanganisira pcb yekugadzira, Zvikamu zvinowanisa, Pcb gungano uye Test. Seye inotungamira yakadhindwa yedunhu bhodhi gungano kambani, isu tinoshanda pamusoro pegomo uye nepaburi gungano, edu ese masisitimu uye michina yakagadzirirwa kusangana dhizaini, kutaurwa uye vhoriyamu yemagetsi magungano masevhisi.
Tine simba rakasimba repamusoro pegomo pcb gungano, uye yakakwira-chaiyo SMT yekugadzira mitsara kubva kuGerman, Japan uye nezvimwe.Yedu timu yeinjiniya inyanzvi uye yakavimbika zvakakwana kutarisira DFM, mainjiniya, kugadzira uye kuyedza. Isu tinokurumidza kupfuura inogona kutumira turnkey PCB zvemagetsi muvhiki.
Diki saizi: 10mm x 10 mm
Saizi yakakura: 500mm * 800mm
Vanachandagwinyira, Flex, Hazvichinji-chinji-Flex, Metal Base
HASL Tungamira kana Lead yemahara, ENIG, Im Sirivha, OSP, Goridhe yakadhirowewa, nezvimwe
5 mamirioni mapoinzi pazuva
1 chidimbu kusvika 500,000 pcs
Yakaroora uye yakapetwa kaviri SMT / SMD
THT (kuburikidza neburi tekinoroji gungano)
SMT & kuburikidza neburi gungano
Chidiki chidiki Chips saizi
Vatungamiriri-vashoma chip vatakuri
Microscope kusvika 20X
AOI (Yakagadziriswa Optical Kuongorora)
Inotungamirwa uye Inotungamira-Yemahara
Tireyi kana Tube
Yakasarudzika Reel uye Yakazara Reel
Gerber mafaera kana dhizaini dhizaini
BOM Chinyorwa (Bhiri reMidziyo)
Sarudza uye isa mafaera kana uine
Wana yenyu pcb Assembly Quote:
Pcb Assembly mutengo kusanganisira pcb Kugadzira mutengo, zvinhu zvinodhura, pcb gungano / Yekuedza mutengo Kuti uwane quote chaiyo, ndokumbira utumire maGerber mafaera, BOM runyorwa, zvigadzirwa zvekugadzira uye huwandu hunodiwasales @pcbfuture.com . Tichadzokera kwauri nechisungo chepamutemo mukati memazuva maviri.